ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံသည်ဗီဒီယိုအတွက် 4K HDR ကုန်တင်ယာဉ်သစ်ကိုအထောက်အကူပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံ Videe များအတွက်နယူး 4K HDR Truck ကားအထောက်အပံ့ပေးတယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံ Videe များအတွက်နယူး 4K HDR Truck ကားအထောက်အပံ့ပေးတယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ
OBX, ဥရောပမှာရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးနှင့်အများဆုံးရှေ့ဆောင်ဇာတိ 4K HDR ကိုကုန်တင်ကားများ၏တဦးတည်း, IBC2019 မှာပြသခံရဖို့
အမ်စတာဒမ်, 11 စက်တင်ဘာလ 2019 - ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်ထရပ်ကားများအတွက်အထူးပြုထားတဲ့အီတလီစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီ Chromaline, OBX, Videe များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အကြီးမားဆုံးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များများအတွက်အဆင်ပြေအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အာရုံစူးစိုက်အဆိုပါတော်လှန်ရေးသမားဒီဇိုင်း, core ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံထုတ်ကုန်အပျေါမှာမူတည်ပါတယ် - routing ကိုနှင့်မြင်ကွင်းစုံအပါအဝင် - ကနေ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ.
Videe, 40 နှစ်ပေါင်းအပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, ယခုဦးဆောင်အားကစားဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ဂီတနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအချို့ကိုဖုံးအုပ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထုတ်လွှင့်ရန်အဆောက်အဦပေးပါသည်။ 4K နှင့် HDR ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းလျှင်မြန်စွာ၎င်း၏ client များအကြားကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, သူတို့ကတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များလိုချင်ခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်ကပိုကင်မရာများ။
"ကျနော်တို့ကဇာတိအတွက် 30 ကင်မရာများမှတက် supporting အစဉ်ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်ပိုပြီးနိုင်စွမ်းခဲ့သည့်သစ်တစ်ခုထရပ်ကားလိုအပ် က Ultra HD"Ilario Urbanetto, Videe အကြီးအကဲအင်ဂျင်နီယာကဆိုသည်။ ။ "ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းအဓိကအိမ်ရှင်ထုတ်လွှင့်စီမံကိန်းတွင်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့သမားတွေ 14 နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက်ထရပ်ကားအတွင်းပိုင်းရှိနိုင်ပါသည်ထဲတွင်အလုပ်လုပ်အရှိဆုံးအဆင်ပြေထရပ်ကားဖြစ်လို - ကသူတို့သက်သာခံစားရကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်, သူတို့က သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှထုတ်လုပ်မှုကယ်နှုတ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့က, အာကာသရှိသည်ခံစားရပါတယ်။ "
Chromaline တစ်ခုထိရောက်သေးယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြေခံအဆောက်အဦဒီဇိုင်းအသုံးပြုပုံအတွင်းပိုင်းအာကာသပူးတွဲတင်ပြထား၏စိန်ခေါ်မှုပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်။ ဤဗဟိုကနေပလက်တီနမ်™ IP3 Router ကဖြစ်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, OBX အတွက် 512 1024 ဗီဒီယိုကို I / O နှင့် 8000 8000 အသံ I / O x x သော။ အဆိုပါဗီဒီယိုအားအချက်ပြနိုင်ပါတယ် HD သို့မဟုတ် 4K က Ultra HD, Quad link ကိုသို့မဟုတ် 2SI ကို formats ဖြစ်စေပါ။ အဖြစ်ကောင်းစွာ switching သကဲ့သို့, ပလက်တီနမ် IP3 လည်းအသံနှင့်ဗီဒီယို signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အိမ်ရှင်အဖြစ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာအတွင်းရှိ 14 မြင်ကွင်းစုံ display ကိုမောင်း။
အဆိုပါဗိသုကာလည်း™ modular အပြောင်းအလဲနဲ့ယူနစ် Dolby အီး encoding ကများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပါအဝင်အချက်ပြအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် Selenio ™ MCP modular ဖြေရှင်းချက်လည်းပါဝင်သည်နှင့် Selenio 6800 + ။ စနစ်ကစီမံခန့်ခွဲမှုရိုးရှင်းဖို့နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအကြားတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း turnaround ပေး, အခြေခံအဆောက်အအုံ hi, လူ့ interface ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာအခြေခံအဆောက်အဦတစ်ခုအလိုလိုသိနှင့်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဆော့ဖျဝဲအလွှာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရဲ့စဉျးစားကွညျ့မက်ဂျလန်™ Sdn orchestral ကထိန်းချုပ်ထားသည်။
"ငါသည် 14 ခဲ့ကတည်းကငါအပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ! - ငါ OB ထရပ်ကားအတွင်းပိုင်းကြီးပြင်း" Nicola Dall'Asta, Chromaline ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ အရာအားလုံး - "ငါ Videe လိုချင်ကြောင်းအဆင်ပြေအလုပ်လုပ်အာကာသကိုဖန်တီးရန်ကိုသိ, ငါတို့သည်အဆင်အပြင်ကနေ cabling မှကြမ်းပြင်မှရိုးရာအပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့်ဒီဇိုင်း, တစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည်စဉ်းစားပါရှိခဲ့ရသည်။
"ကျွန်မမြင်ယောင်ကြည့်ပါကအကောင်းဆုံး-in-the-စျေးကွက်မဆိုအရွယ်အစားထရပ်ကားအဘို့ဖြစ်၏ကြောင့်၎င်း, အပေါငျးတို့သ image processing တွင်, လမ်းကြောင်းများနှင့်ကော်ဘို့ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ရှေးခယျြခဲ့," ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ပလက်တီနမ် IP3 လိုအပ် wideband အချက်ပြမှုများ Videe ၏နံပါတ်ကယ်မနှုတ်နိုင်ကြောင်းစျေးကွက်အပေါ်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ Router ကိုအတွင်းအပြင်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြင်ကွင်းစုံရှိခြင်း cabling ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်အတွက်အများကြီးကယ်တင်, ထိုသို့ကျနော်တို့ကိုလူများတို့အားပေးနိုငျသောအာကာသကယ်တင်တော်မူ၏။ "
OBX Tomassini ပုံစံကတည်ဆောက်နေတဲ့သုံးဆတိုးချဲ့နောက်တွဲယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ site ပေါ်တွင်၎င်း၏အပြည့်အဝစွမ်းရည်တိုးချဲ့သည့်အခါ OBX, ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းတစ်မြို့တိုက်ခန်း၏အရွယ်အစား 76 စတုရန်းမီတာပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ရပ်များမှာအိမ်ရှင်ထုတ်လွှင့်ဘဏ်ဍာထိုသို့စံပြအောင်, တစ်ဦးကို double ထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ထွက်ချထားသည်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်မားအဆင့်ဆင့်မှဦးဆောင်ကာအဆင်ပြေတဲ့ operating ပတ်ဝန်းကျင် - လုပ်ဆောင်ချက်ကို OBX ၏မြင့်အဆင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသော်လည်း, သင်္ဘောသားအခန်းတစ်ခန်း၏ပဒေသာနှင့်ယုတ္တိ layout ကိုရှိသည်။
"Nicola နှင့် Chromaline မှာသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအဆိုပါစနစ်ဒီဇိုင်းများအမြဲဖှယျနှင့်ဆန်းသစ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အလွန်အကြိုးနေကြတယ်" ဟု Mathias Eckert, SVP & GM က EMEA / ပွေး, ပလေးအောက် & ကွန်ယက်အဖွဲ့မှာကပြောပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ "ကျနော်တို့ကငါတို့နည်းပညာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရမထိခိုက်စေဘဲ, အာကာသနှင့်အာဏာငွေစုခေတ်သစ်ဗိသုကာဝယ်လိုအားကယ်တင်တတ်၏ကွောငျးတငျပွဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း, မကြာသေးမီကထုတ်လုပ်မှုကုန်တင်ကားများ၏အရေအတွက်ကိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီ။ "
Videe ရဲ့ OBX ဝန်ဆောင်မှုသို့သွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးက IBC2019 မှာယင်း၏မိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလမ်းရထားနှင့်မက်ထရိုဘူတာအနီးပြင်ပပြပွဲဧရိယာ၌ O.C02 မှာ Chromaline နဖူးစည်းစာတန်းအောက်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင့်ထံမှနည်းပညာကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေးတွေ့နိုင်ပါသည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ရပ်တည်ချက် 1.D61 ပေါ်မှာ။
4K ခရိုမိုလင်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော HDR IBC2019 Ilario Urbanetto ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု မက်ဂျလန် Sdn orchestral Mathias Eckert MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Nicola Dall'Asta OBX အသံလွှင့်အပြင်ဘက်တွင် ရှေ့ဆောင် ပလက်တီနမ် IP3 Router စိတ်ချရသော Selenio 6800 + Selenio MCP ဗီဒီယို 2019-09-12
ယခင်: ဓာတ်ပုံ Editor ကို - Volume ကိုဓါတ်ပုံပညာ (လူငယ်ကျောင်း & အားကစားရုပ်ပုံနေ့)
နောက်တစ်ခု: axon IBC 2019 ရန် Cerebrum ၏အမှတ်တံဆိပ်နယူးဗားရှင်းများရရှိစေ